Magaca Saxda Ah Ee Raysalwasaaraha Itoobiya, Dadiisa Iyo Diinta Uu Haysto: Xogo Ka Duwan Inta La Sheego | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Magaca Saxda Ah Ee Raysalwasaaraha Itoobiya, Dadiisa Iyo Diinta Uu Haysto: Xogo...
Magaca Saxda Ah Ee Raysalwasaaraha Itoobiya, Dadiisa Iyo Diinta Uu Haysto: Xogo Ka Duwan Inta La Sheego
Weriye ka socda talefishanka BBC qaybtiisa afka ingiriisiga, gaar ahaan wararka Afrika, ayaa dhowaan booqday deegaanka uu asal ahaan ka soo jeedo raysalwasaraha dalka Itoobiya, si uu xog dheeraad ah uga soo helo noloshiisii carruurnimo iyo qoyskiisa.
In kasta oo waraaqaha rasmiga ah ee u diiwaangashan raysalwasaare Abiy Axmed Cali ay sheegayaan in uu dhashay sannadkii 1976 kii, oo ay da’diisu noqonayso 42 sano,wariyuhu waxa uu soo helay xog taas aad uga duwan oo la xidhiidha taariikhda dhalashada ee raysalwasaaraha.
“Abiy Axmed, sannadkii 1968 kii ayaa uu ku dhashay gobalka dadkiisu muslimiinta u badan yihiin ee Oromiya” ayaa uu weriyuhu ku yidhi, warbixintan oo iyada oo fiidyow qoraallo wehelinayaan ah, 21kii bishan julaay lagu faafiyey barta ay BBC qaybteeda afka ingiriisigu ku leedahay internetka.
Waxa kale oo uu wariyuhu ka hadlay diinta uu aaminsan yahay raysalwasaaruhu oo dadku inta badan hadal geliyaan, “Aabihii waa Muslim, hooyadii waa Kiristaan, Abiy Axmedna waa Kiristaan aaminsan mad-habta Protestant ka” ayaa lagu yidhi warbixinta uu sii daayey barnamaijka BBC News Afrika.
Laakiin waxaa la sheegay, maadaama oo uu deegaanku muslimiin u badanyahay, aabihiina muslim yahay, in Abiy Axmed uu Qur’aanka wax ka bartay. Waxa aanu aabihii sheegay in uu akhriyi jiray aayado Qur’aanka Kariimka ah ka mid ah.
Magaca raysalwasaaruhu waxa uu sax ku yahay Abiyot oo ah erey afka oromada ku jira oo macnihiisu yahay, ‘Kacaan / kacdoon’. Laakiin waxaa magaciisa sida uu hadda u dhigan yahay u beddelay aabihii, “Aniga ayaa ‘Abiy’ ku odhan jiray, aniga oo soo gaabinaya magaciisa” ayaa uu idhi raysalwasaaraha aabihii oo BBC da u warramayey.
Raysalwasaare Abiy Axmed waxa uu geeddiga waxbarasho ka bilaabay dugsiga hoose ee degmada Bashaashaa, oo weli shaqeeya. Laba nin oo ay walaalo yihiin ayaa uu wariyaha barnamaijka diyaariyey waraystay, “Dhammaantayo waa uu naga duwanaa, waxa uu ahaa nin waxa ku cusub aad ugu fiirsi badan” waxaa sidaa yidhi, mid ka mid ah labadiisa walaal ee warramay.
Waxa aanu intaas ku sii daray, in Abiyot aanu isku koobin waxbarashada dugsiga ee sida oo kalana uu diintiisa baran jiray. “Waxa uu ku dadaalay in uu raaco dugsiga iyo waxbarashada diintiisa labadaba” ayaa uu yidhi ninka ay walaalaha yihiin raysalwasaaraha oo jooga degmada Bashaasha, isaga oo la hadlayey BBC News Africa.
Isaga oo hadalkiisa sii watana waxa uu sheegay in Abiy Axmed yaraantiisii aanu ahayn carruurta jecel in ay waqtigooda ciyaar ku wada qaataan, balse uu ka jeclaa ag-joogga dadka waaweyn, “Inta la ciyaarayo isagu waxa uu ka doorbidi jiray, oo uu la joogi jiray dadka waaweyn” ayaa uu yidhi Abiy walaalkii oo aan warbixinta magaciisa lagu sheegin.
Previous articleMaareeyihii biyo xireenka Abay ee dalka Itoobiya oo isaga oo mayd ah la helay
Next articleAnigu La Ficil Tamimaayo Muuse Biixi……” Eng Faysal Cali Waraabe –